FAQ - orinasa Qingdao New Asia Pacific Group Company
Miorina amin'ny baiko samihafa, hafa koa. Azafady mba jereo miaraka amin'ny olona mpivarotra miorina amin'ny fampahalalana momba ny baikonao. Misaotra anao!
Izahay dia manome antoka ny fitaovana sy ny asa ataontsika. Ny fanoloran-tenanay dia ny fahafaham-ponao amin'ny vokatra azontsika. Amin'ny garantiana na tsia, dia ny kolontsainan'ny orinasa iarahantsika sy mamaha ny olana rehetra an'ny mpanjifa amin'ny fahafaham-pon'ny tsirairay
Fiakanjo fiarovana, Tariby endrika-vovoka mihetsiketsika, Water-Proof Apron, Fiakanjo fiarovana, Akanjo fitsaboana fitsaboana, Rano Hdpe aprily amin'ny rano,